အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: '' Facebook Account တွေ အဖျက်ခံရတော့ မှာလား ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ"
please forward this message to 25 FB users for us to make sure that you are active user of FB. If can't pass this to 25 users you're account will be cut without any hesitancy
Communication Rule အသစ်တစ်ခုချမှတ်လိုက်ပြီ .....ဖွင့်ပြီး မသုံးတဲ့ Account တွေဆို . . .
အကောင့်ပေါင်း 1 သန်းကျော်ကို ဖျက်ပစ်မှာတဲ့ ဒီစာကိုFB Chatbox ကနေ . . .
ခုပြောထားတဲ့ အတိုင်းပဲလုပ်ကြမယ်ထင်ပါတယ် ကျန်တဲ့ တစ်ယောက်ကတော့ မလုပ်ဘူး ( ကျွန်တော်ပဲ :P ) ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့် မလုပ်လဲ ကျွန်တော့် အကောင့် အဖျက်ခံရမှာမဟုတ်လို့ ပါ အဲ့ ဒါကြောင့်ကိုယ့် ရဲ့Facebook Account လေးပျက်သွားမှာကိုသိပ်ပြီးတော့ ကြောက်မနေပါနဲ့ 
ဟုတ်ပီ ကျွန်တော် ဘာကြောင့် ဒါတွေမေးလဲဆိုတာပြောပြမယ် ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေတွေမှာ နံပါတ်စဉ် 1 ကနေ3အထိကို မသုံးဖြစ်ဘူးလို့ ဖြေခဲ့ ရင်တောင် သင့် ရဲ့ အကောင့် အဖျက်ခံရမှာမဟုတ်ပါဘူး နံပါတ်စဉ်4ထိသာ မသုံးဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ အဖြေကို ဖြေခဲ့ မိရင်တော့သေချာပါပြီ သင့် ရဲ့ အကောင့် ကို အဖျက်ခံရဖို့99 % ရာခိုင်နှုန်းသေချာသွားပါပြီ ကျွန်တော်သေချာပြောရဲ
တာကတော့ လလောက်ထိမသုံးဖြစ်တဲ့ အကောင့် ဥပမာပေါ့တလတခါ နှစ်လ တခါပေါ့အဲ့ လောက်မှအသုံးမပြုဖြစ်တဲ့ အကောင့် တွေကတော့ သိပ်ပြီးတော့ ကြောက်ဖို့ 
မလိုသေးပါဘူး ဒီထက် လပိုသွားတာမျိုး5လကနေ တနှစ်လောက်ထိ မသုံးပဲနေလိုက်မိတဲ့ အကောင့် ဆိုရင်တော့အဖျက်ခံရဖို့ နီးစပ်သွားပါပြီ အိုကေဗျာ.... ဒီနေရာမှာ ဥပမာတခုလောက်ပြောပြမယ် ဗျာ သင့် အနေဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် 
ဖေ့ ဘွတ်ကို မသုံးဖြစ်ခဲ့ ဘူး ( လများစွာကြာသွားတယ် ...နှစ်နဲ့ တောင်ချီသွားတယ် ) ဆိုပါလျှင် သင့် အကောင့် အဖျက်ခံရပြီပေါ့ဒီနေရာမှာ သင်ဟာ နိုင်ငံတခု သို့ မဟုတ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတခုခုမှာ အရေးပါအရာရောက်နေသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ မယ် ဆိုပါလျှင် ( ဒါကဥပမာပေးတာပါ ရိုးရိုးသာမန် User တစ်ယောက်အနေဲ့ လဲ ဒီအခွင့် အရေးမျိုးရနိုင်ပါတယ် ) မတတ်သာလို့ ဖေ့ ဘွတ်ကို မသုံးဖြစ်ခဲ့ တာပါဆိုလျှင် သင် သုံးစဉ်က သိမ်းဆည်းထားခဲ့ တဲ့Data တွေ ကိုပြန်လိုချင်ရင် နှမြောတသဖြစ်ပီးတော့ ဒီတိုင်းပဲထိုင်ပြီးနေမလား ပြန်ရဖို့ ကြိုးစားမလား ဟုတ်ပီဗျာ
အဲ့ ဒီအချက်အလက်လေးတွေပြန်လို့ ချင်လို့သင့် ရဲ့ အဖျက်ခံလိုက်ရတဲ့Facebook Account လေးကို
နှစ်တွေကြာမှပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင် ဒီလိပ်စာ https://www.facebook.com/help ကိုသာမှတ်ထားလိုက်ပါ အဲ့ ဒီနေရာမှာ သင့် ရဲ့ အကောင့် ကိုပြန်လိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ အထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံပြ
သနိုင်တယ် သင့် အတွက် ဒီအကောင့် က အချက်အလက်တွေက အရမ်းကိုအရေးကြီးလို့ ပါဆိုပါလျှင်သူတို့ ဆီမှာပြန်လည်တောင်းဆိုပြီး သင့် ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Data (
အချက်အလက် ) တွေကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် အရေးကြီးတာက အဲ့ ဒီအကောင့် ကိုသုံးတဲ့ E- Mail လေးရှိနေဖို့ တော့ လိုတယ်ဗျနော် ;) သင့် ရဲ့ အကောင့် ဟာ
ပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ထားမျိုး အဓိကရုဏ်တွေဖြစ်ပွားအောင်ဖန်တီးခဲ့ တာမျိုး နောက်ဆုံး ကုန်ကုန်ပြောရရင် လုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ အကောင့် မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြန်လည်ရယူဖို့ အဆင်ပြေပါလိမ့် 
ဘာလို့ လဲဆိုတော့Facebook Community ကသင့် ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဒီတိုင်း
ပြီးစလွယ်ဖျက်ပစ်သွားမှာမဟုတ်လို့ ပါ သူ့ တို့ က သင့် ရဲ့Profile,Page, Group တွေက Data တွေကို ဖျက်မပစ်ပဲနဲ့တကယ်အသုံးမပြုတောတာတို့( လုပ်ကြံဖန်တီးထား တာ ) တို့မှန်ရင်တော့အသုံးပြုလို့ မရတော့ အောင် ပိတ်ပဲပိတ်ပစ်ပြီး အချက်အလက်တွေကိုတော့ သူတို့ ရဲ့ှဆာဗာထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားမှာပါ အဲ့ ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတို့ အနေနဲ့ကိုယ့် အကောင့် လေးပျက်မှာပူမနေကြပါနဲ့ဗျာ ကျွန်တော်သိပါတယ် ဖေ့ ဘွတ် သုံးနေကျလူတွေ တနေ့ ကို အနည်းဆုံး တခါလောက်
Notifications လေးတွေမဖတ်ရရင် Comment လေးတွေ မပေးရရင် Photo လေးတွေများမတင်ရရင် မနေနိုင်ကြဘူးဆိုတာကို သိထားပါတယ် :Pေိခိ အဲ့ ဒီတော့ အနော် ပြောတဲ့တလတခါ တနှစ် တခါလောက်တောင် မသုံးဖြစ်လို့ အကောင့် အဖျက်ခံရမယ့် သူစာရင်းထဲမှာမပါဘူးဆိုတာသေချာနေပါ
တယ်ဗျာ ဒါကြောင့် ပူပန်တွေးတောပြီးကြောက်မနေကြပါနဲ့အားတိုင်းလိုက်ပီးတော့Share မနေကြပါနဲ့အမြင်ကတ်စရာဖြစ်နေပါဦးမယ် Share ချင်ရင်တော့ ဒီပို့ စ်လေးကို သာရှဲပေးဗျာ ဒါကအကောင်းဆုံးပါ အိုကေ .............. ;)
သင့် ရဲ့Facebook Account နဲ့ ပါတ်သက်လို့ လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့https://www.facebook.com/help/search/?q=how+do+i+delete+my+account နေရာလေးမှာသွားရောက်လေ့ လာလို့ 
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 2:55 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook